Zimbabwe�s government has conducted a concerted campaign of violence, repression, and intimidation showing its disregard for human rights, the rule of law, and the welfare of its citizens. Ultimately Zimbabweans must resolve their political crisis, and the United States supports the region's call for the government to enter into dialogue with the political opposition to find a solution acceptable to the people of Zimbabwe.
The United States� sanctions target only those responsible for Zimbabwe's political crisis and not ordinary citizens. They support regional and international efforts to convince Zimbabwe�s government to abandon political repression and engage in meaningful dialogue with the political opposition. Should Zimbabwe�s rulers continue to oppress its citizens and to resist forthright efforts toward resolving the country�s political crisis, we are prepared to impose additional targeted financial and travel sanctions on those undermining democracy in Zimbabwe.